Akụkọ kachasị ọhụrụ banyere Ọrụ Ọrụ Obodo Federal na Nigeria & ụwa | TAA
Aisha Bagudu: Enwere m aka n'inyere ndi mmadu ohere inweta ihe omuma
Ndị agha na-ebibi ụlọ ọrụ Boko Haram na Borno
Islam State beheads atọ ụmụnna na Afghanistan
ANYỊ na-agba Ndị Kraịst ume ka ha ghara ịlụ ọgụ
Robin Hood, Rocky Balboa nyeere Klopp aka ịmalite na Liverpool
Home Tags Òtù Ọrụ Nlekọta Ọrụ Obodo Federal
Òtù Ọrụ Nlekọta Ọrụ Obodo Federal
Isi nke Service: Nkwụsịtụ nke ndị nduzi NEMA isii dị n'usoro
Onyeisi nke ọrụ ọrụ nke Federation, Oriakụ Winifred Oyo-Ita, Thursday kwuru na ndị nduzi isii nke Board nke National Emergency Management Agency (NEMA), bụ onyeisi oche nke Vice President Yemi Osinbajo, kwadoro.
Ndị isi gọọmenti na-ahụ maka ndị ọrụ gọọmentị na-ahụ maka ụlọ ọrụ gọọmentị na-achọ ọrụ ọzọ
Gomenti Gọọmenti agbaala onye isi oche ọhụrụ a na-ahụ maka ya na ndị òtù Board of the Administrative Staff College of Nigeria (ASCON) ka ha chọọ isi ego maka ọrụ ya.
Gọọmentị Federal na-agọnahụ 16, ọnọdụ 200 na ndị mba ọzọ
Gọọmentị Gọọmenti kwuru na ọ dịghị ọrụ 16,200 nọ n'ọrụ na 26 Nigeria embassies na ozi ná mba ọzọ ka a na-eme ka ndị Niger kwere.
Ụlọikpe jụrụ AGF Abubakar Malami bidoro ịkwụsị nchọpụta Senate banyere Abdulrsheed Maina
Ikpe ziri ezi Binta Nyako nke Ụlọikpe Kasị Elu Federal, Abuja, ụnyaahụ, jụrụ inye iwu nke iwu mkpesa na-egbochi Mgbakọ Mba ahụ site na ịchọta Attorney General nke Federation na Minista nke Ikpe Ziri Ezi, Abubakar Malami (SAN) maka ntinyeghachi nke Abdulrasheed Maina, n'ime Ọrụ Obodo Federal.
Gọọmentị Federal jụrụ ụlọikpe iji kwụsị nchọpụta Senate nke ntinyeghachi nke Abdulrasheed Maina
Onye ọka iwu na-ahụ maka ndị uweojii, Abubakar Malami, degaara ụlọikpe dị elu na Abuja, na-achọ igbochi senate ka ọ chọpụta ntinyeghachi nke Abdulrasheed Maina n'ime ọrụ obodo.
Mkpe ikpe ikpe nke Ụlọikpe Mkpegharị ikpe
Dịka ọmụmaatụ, ebubo ikpe ikpe ahụ megidere otu n'ime ndị ọkàikpe nke Ngalaba Nchịkwa State (DSS) jidere n'afọ gara aga ka ụlọ ikpe ahụ kwadoro ya. N'ihi ya, a nabatara ọkàikpe ahụ ma kwe ka ọ maliteghachi ọrụ n'ụlọikpe ya.
Ekwenyeghị m ikike iweghachi Abdulrasheed Maina - AGF Abubakar Malami
Onye isi ulo oru Federation (AGF) na Minster nke ikpe ziri ezi, Abubakar Malami, siri ọnwụ na o nyeghị ikike akwụkwọ edemede ahụ nke weghachitere onye isi oche mbụ, onye isi oche nke ndị isi na Pension Reforms, Abdulrasheed Maina.
Ekwenyeghi m akwụkwọ ozi maka iweghachite Abdulrasheed Maina - Winifred Oyo-Ita
Onye isi nke ọrụ nke Federation, Oriakụ Winfred Oyo-Ita, na Thursday kwetara na ọ kwadoro akwụkwọ ozi ahụ maka nlọghachi onye isi oche nke onyeisi ọrụ nrụrụ na Pension Reform, Abdulrasheed Maina.
Ihe mere e ji kpoo Abdulrasheed Maina nnukwu ụlọ ezumike nká na 2013 - FSCS
Onye isi oche nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ Ọrụ Obodo Federal, Joseph Akande, kwuru na ọ bụ onye nwebu ụgwọ ezumike nká, bụ Abdulrasheed Maina, ka a kwụsịrị ịrụ ọrụ.
Akpa nwanyi nke obodo Kebbi, Hajia Aisha Atiku Bagudu, kwuru na o kwadoro inye aka na ndi mmadu na ndi mmadu no n'ime obodo site na ntọala ya.
Ndi agha Naijiria na Monday siri na ndi agha ha ebibiwo ulo oru ndi ulo oru Boko Haram na Benisheikh, Borno.
Onye kwupụtara nkwanye ùgwù nke akụkọ ifo nke Robin Hood na Rocky Balboa, Jurgen Klopp nwere ike ịbụ ihe na-adịghị mma site na Liverpool dị ka ndị kachasị mmasị na Njikọ Champions League nke ikpeazụ, nke mbụ megide Rome.
Ndi Naijiria na-aru oru, NLC, jikota otutu ndi mmadu na-acho nnwere onwe na ochichi onye kwuo uche ha ka ha nwee iru uju nke ihe ndi a na-adighi nma nke nwanyi Afrika. Ọ bụ ezie na mwute Winnie dara, ọrụ ndị Naijiria na-arụ nwere ọtụtụ ihe mere ha ga-eji na-agba mgba, ịchụ àjà na ijere mmadụ ozi nke Mama Winnie gosipụtara.
Ndị isi agha sitere na islam esitela na ha gbupụrụ ụmụ nwoke atọ, ndị niile na-arụ ọrụ na ahụike, na mpaghara Nandarhar nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ Afghanistan, otu onye ọrụ gọọmenti kwuru na Monday.
Onye nchịkwa Michael Michael na-enweta nkwado ndị uweojii mgbe egwu egwu gasịrị
Ejiri onye nkụzi England Michael Oliver nye ndị uweojii nkwado mgbe ndị ọrụ mgbasaozi mgbasa ozi na-emegbu ya na-agbaso ọgba aghara nke ndị Njikọ Champions League.
Boris Johnson: okwu Cameroon chọrọ ngwa ngwa, ikike mmadụ iji dozie nsogbu Anglophone
Onye isi obodo Britain, Boris Johnson, kwughachiri na United Kingdom na-akpọ maka mkparịta ụka iji dozie nsogbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nchedo na mpaghara Cameroon nke Anglophone.
Ụmụaka nde abụọ si n'ụlọ akwụkwọ dị na Angola
Banyere umuaka umuaka 2 agaghi aga ulo akwukwo na Angola, ozi ulo oru Education.
Onye isi ulo oru ego nke World Bank, Mr. Jim Kim, agbaala mba Africa ume ka ha baa uba na aku na uba di iche iche na gbasaa uzu di iche iche di iche iche, ka ha we ghara itufu otutu nde oru.